Tekkatho Moe War (17) – HlaMin
Tekkatho Moe War (17)
ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း နဲ့ ဖျာပုံ နီလုံဦး….
ခုတလော အိမ်အောင်းကြာဘဝမှာ စာပေအနုပညာရောင်းရင်းတွေကို သတိရနေမိတာတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်…။ ကွယ်လွန်သူ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ အောင်ပြည့် ပြီးတော့ အခုတစ်ခါ ဟိုးတစ်ခေတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ သူငယ်ချင်း ဖျာပုံနီလုံဦး ကိုအထူးသတိရနေပြန်ပြီ။
မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေလှန်လှောကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲကြည့်ကြည့် အမှန်တရားဖြစ်နေမဲ့ ကိုယ်​စာစီဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့လိုက်​လို့ ဝမ်းသာအားရ​ ဖြစ်သွားတယ်။ ပေဖူးလွှာ ၁၉၈၇ မေလ ထုတ် မှာပါ။ မဂ္ဂဇင်းတွေ အမျိုးအစား ၂၀လောက်ထွက်တာတောင် နာမည်ရလူကြိုက်များတာဆိုရင် စောင်ရေ ၆၀၀၀၊ ၈၀၀၀ ရောင်းကုန်တဲ့ ခေတ်…။ မတူသလား မမေးနဲ့…။ မတူရင်လာမ ယှဥ် နဲ့၊ မတုနဲ့…။ အနုပညာရဲ့စွမ်းပကား….
” ချာလီချက်ပလင် ဝေဒနာ ”
အနုပညာစွမ်းရည်၊ အဆီအနှစ် ထုတ်ဖော် လှစ်ပြ၊
ချာလီ ချက်ပလင် အသင်ရဲ့ စွမ်းပကား၊
ပညာသားကို လေးစား အားကျမိပါရဲ့…။
စင်ပေါ်ထားလို့ ခွဲခြား မပီ၊
“ချာလီ” များစွာ တန်းစီပါ
မျက်ရစ် မျက်ခုံး မျက်လုံး မျက်ဖန်၊
ကိုယ်ဟန် အနေအထား ခြေဆုံးဖျားထိ
တတိယနေရာ၊ ခမျာ ချာလီအစစ်
ဟာသ ခုံမင်၊ ပျော်ရွှင်စရာပွဲတစ်ပွဲ ယှဥ်ပြိုင်ရွေးကြပေမဲ့…။
“ချာလီ” ရဲ့သနစ်၊ အဖြစ်ဟာ
ရယ်စရာ ထင်ရပါလည်း ဝမ်းသာအံ့ဩ၊
ပျော်မောဖွယ်မဟုတ် ရုတ်ခြည်း အတွေးပွား၊
အသင်ရဲ့ နေရာ ဘယ်မှာ ဘယ်လဲ….။ ။
၁၇ -၉ -၁၉၈၆
ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း- ၁၉၈၇ မေလ။